Tresdpro R1, ọkachamara na-ebi akwụkwọ nke Spanish | Akụrụngwa n'efu
Ofwa nke ndị na-ebi akwụkwọ 3D agbanweela ọtụtụ n'afọ ndị na-adịbeghị anya. Ebe ọ bụ na achọpụtara teknụzụ ma bịarute na tebụl anyị, ụdị nke ndị na-ebi akwụkwọ 3D dị ugbu a na-ejedebe na ụdị ikike atọ na ọtụtụ ụdị omenala sitere na ọrụ RepRap ma ọ bụ nke a makwaara dị ka Clone Wars.
Ọ bụ ya mere o ji dị mma izute ụdị ọhụrụ nke ndị na-ebi akwụkwọ 3D dị ka ngwaahịa Tresdpro, onye nrụpụta Tresdpro R1 ọkachamara na-ebi akwụkwọ nke dị ka ngwa obibi.
Tresdpro R1 bụ onye nbipute nke arụpụtara kpamkpam na Spain, ọ bụghị n'efu, ụlọ ọrụ ahụ, Tresdpro, sitere na Lucena (Córdoba). O nwere ike ịbụ ihe mbupute 3D izizi nke arụpụtara na Spen, ọ bụrụ na anyị eleghara ụdị Clone Wars anya nke ndị ọrụ wuru n'ụzọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọrụ aka.
Ihe nha nke Tresdpro R1 bụ 22 x 27 x 25 cm. kpuchie ya na ígwè na methacrylate etiti na ọ bụghị naanị mee ka okpomoku na ọnọdụ okpomọkụ sie ike mgbe a na-ebi akwụkwọ kamakwa ọ bụ nchekwa maka ndị ọrụ ma zere mkpọtụ nke nwere ike iwe iwe.
1 Tresdpro R1 ga-enwe ike ịmepụta akụkụ ya na ihe abụọ na-enweghị ịkwụsị ibipụta
2 Utu Pi 3 B + bụ ụbụrụ nke Tresdpro R1
Tresdpro R1 ga-enwe ike ịmepụta akụkụ ya na ihe abụọ na-enweghị ịkwụsị ibipụta
Tresdpro R1 anya nwere ike ịbụ maara n'ihi 5-anụ ọhịa ihuenyo mmetụ na ihe nlereanya nwere na Central akụkụ nke a cubic Ọdịdị, ma Tresdpro R1 ngwaike abụghị ihe a na-ahụkarị n'etiti ndị na-ebi akwụkwọ 3D. Tresdpro R1 nwere teknụzụ DEM, teknụzụ nke nwere okpukpu abụọ nke nnwere onwe nwere akara nke ahụ ga - enyere anyị aka ọ bụghị naanị ime ka anyị nwekwuo echiche zuru oke kamakwa iji mepụta iberibe ihe na agba dị iche iche. Nke a extruder nwere ike iji ihe dị iche iche ebe ọ na-ekweta na okpomọkụ nke 300 degrees.
Okpukpo nke ọkwa nke onye na-emepụta ihe ga-agbagharị n'etiti 0,3 mm na 1 mm, dabere na nha anyị ji akara na ngwanrọ mbipụta. Nke pụtara na iberibe e kere na mgbakwunye inwe ezigbo ngwụcha, nwere ike ịdị oke ike ma kwụsie ike.
Na akụkụ nke ngwanrọ, ihe na-abawanye n'ime 3D na-ebi akwụkwọ, Tresdpro R1 abụghị ebe dị anya, na-enwe sọftụwia ọgbara ọhụrụ na emelitere. Na mgbakwunye inwe ihuenyo mmetụ, onye ọrụ nwere ike jikwaa ngwa obibi 3D site na iji kọmputa ma ọ bụ smartphone. All ekele maka ngwanrọ dabere na Desktọpụ Astrobox. Sọftụwia nke kọmpụta Akụrụngwa na-ejikwa, Raspberry Pi 3 B +. Ngwa Astrobox Desktọpụ ga-ekwe ka iji ekwentị dị ka ngwaọrụ ọzọ, na mgbakwunye na kọmputa ma ọ bụ laptọọpụ kpochapụwo na-esokarị ngwaọrụ ndị a mgbe niile, site na iji mee ụdị na mbipụta ozugbo.
Utu Pi 3 B + bụ ụbụrụ nke Tresdpro R1
Igwe ojii na ebe nrụọrụ weebụ bụ akụkụ ọzọ dị mkpa nke ngwanrọ a. Nke a bụ ihe ọhụụ na - ewu ewu na - ewu ewu n’ahịa 3D na ngwa nbipute ole na ole na - enye ndị ọrụ ha. Ihe omume a na enyere 3D mbipụta aka ozugbo site na ebe nchekwa ọha ma ọ bụ ebe nchekwa weebụ. Ọ dịghị mkpa maka mpụga ngwaike, naanị na ihuenyo mmetụ nke ngwa nbipute onwe ya kemgbe Astrobox na-enye ohere iji jikọọ na ebe nchekwa dị ka Thingiverse. Nkwukọrịta WiFi yana site na draịva USB dịkwa na ngwa nbipute 3D a, njirimara ndị ghọrọ ọrụ dị mkpa yana ọtụtụ ndị na-ebi akwụkwọ anyị nwere ike inweta n'ahịa enweelarị ọnwa.
Onye mbipute Tresdpro R1 dị site na gị gọọmentị webụsaịtị. Ọnụ nke Tresdpro R1 bụ euro 2.499, ọnụahịa dị elu mgbe ị na-atụle ndị na-ebi akwụkwọ na anyị nwere ike iwuli onwe anyị, mana ezi uche dị na ya maka ụdị onye nbipute 3D ọkachamara. Ọ bụ ezie na ọ bụkwa ọnụahịa nke ụlọ obibi 3D izizi mbụ nwere, yabụ ọ bụrụ na anyị jiri teknụzụ a n'ezie, ọnụahịa ahụ nwere ike ịbụ ezigbo ihe.
Ekwere m na ya onye nbipute Tresdpro R1 na-enye ohere ịnweta ngwọta ọkachamara na ụwa anụ ụlọ ọ bụ ezie na anyị ga-ekwu na ụdị mbipụta dị otú ahụ bụ maka ndị na-achọ ihe na ndị na-adịgide adịgide n'ime ụwa mbipụta 3D
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » Nkọwa 3D » Tresdpro R1, ọkachamara na-ebi akwụkwọ nke Spanish